ट्रम्प प्रशासनबाट एसाइलमबारे नयाँ निर्देशिका जारी, शरण खोज्ने अझ धेरैलाई फिर्ता पठाइने - Khasokhas Magazine
ट्रम्प प्रशासनबाट एसाइलमबारे नयाँ निर्देशिका जारी, शरण खोज्ने अझ धेरैलाई फिर्ता पठाइने
अमेरिकी सरकारले बुधबार एसाइलमबारे नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । क्रेडिबल फियर, रिजनेवल फियर, एसाइलम र रिफ्युजी दाबीबारे युएससीआईएसले एसाइलम आवेदकको अन्तरवार्ता लिने अफिसरहरुलाई नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सिमानामा अपनाइएको एसाइलमबारेको नयाँ नीतिले शरण खोज्ने हजारौंलाई अध्यागमन अदालतमा निवेदन दिनुअगाडि नै फिर्ता पठाउने सम्भावना रहेको छ । नयाँ नीति अनुशार घरेलु हिंशा र गिरोह हिंशाको पीडित देखाउनेहरुका आवेदन तत्काल अस्वीकार गरिनेछ । नयाँ नीति अनुशार गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर आउनेहरुको सन्दर्भमा आवेदकको डर जायज भएपनि एसाइलम अस्वीकार गर्न अधिकारीहरुलाई प्रेरित गरिएको छ ।
निर्देशिकाको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
गत महिना महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसनले घरेलु हिंशा र गिरोह हिंशाका पीडितहरु एसाइलमका लागि योग्य नहुने निर्णय गरे लगत्तै त्यसको कार्यान्वयनका लागि हिजो डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी अन्तरगतको युएससीआईएसले माताहतका अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशिका जारी गरेको हो । तर अधिकारकर्मीहरुले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुशार गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर आउनेहरुले समेत एसाइलम पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
फुडस्ट्याम्प, मेडिकेड लिनेलाई ग्रिनकार्ड नदिने नियमबाट को प्रभावित हुन्छन् ? को हुन्नन् ?
कम आम्दानी हुनेलाई ग्रिनकार्ड नदिने नियम फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित हुँदै, ६० दिन प्रतिकृया मागिने
फुड स्ट्याम्प र मेडिकेड लिनेलाई समेत ग्रिनकार्ड नदिने नियम घोषणा (पूर्ण पाठ)